September 19, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Ethiopia charges prominent opposition figure with terrorism – Washington Post
Ethiopia News September 19, 2020
Ethiopia charges prominent opposition figure with terrorism Washington PostSii akhriso
Cayaaraha September 19, 2020
(London) 19 Sebt 2020. Arsenal ayaa garoonka Emirates guul dirqi ah kaga gaartay kooxda West Ham, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada Isbuuca labaad ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbadhac 1-1 ay isku dhaafi waayeen labada kooxood. Daqiiqadii 25-aad kooxda Arsenal ayaa hoggaanka u […]Sii akhriso
(Manchester) 19 Sebt 2020. Crystal Palace ayaa guuldarro ku baday Manchester United garoonkeeda Old Trafford, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-3, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada Isbuuca labaad ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Crystal Palace. Daqiiqadii 7-aad Crystal Palace Sii akhriso
(London) 19 Sebt 2020. Kooxda Arsenal ayaa garoonkeeda Emirates Stadium ku soo dhaweyn doonto naadiga West Ham United, si ay u wada ciyaaraan ciyaar ka tirsan kulamada Isbuuca labaad ee horyaalka Premier League Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Arsenal iyo West Ham United ee horyaalka Premier League. SAFAFKA […]Sii akhriso
(London) 19 Sebt 2020. Naadiga reer England ee Tottenham ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay lasoo saxiixatay daafaca bidix kooxda Real Madrid ee Sergio Reguilón. Kooxda reer England ee Tottenham ayaa ka saxiixatay Sergio Reguilón heshiis gaaraya ilaa iyo 2025. Tottenham Hotspur ayaa bayaan ay ku soo qortay website-keeda rasmiga ah waxay ku shaacisay: Sii akhriso
(Liverpool) 19 Sebt 2020. Liverpool ayaa si Rasmi ah ugu dhawaaqday inay dhameystirtay heshiiska xiddiga reer Portugal ee Diogo Jota, kaasoo ay ka soo qaadatay kooxda Wolverhampton. Sida lagu shaacisay website-ka ee kooxda Liverpool xiddiga reer Portugal ee Diogo Jota ayaa heshiis waqti dheer ugu biiray naadiga Reds. Diogo Jota ayaa kaddib markii uu saxiixay […]Sii akhriso
DF oo faah faahin ka bixisay Shilkii diyaaradeed ee maanta ka dhacay Garoonka Aadan Cadde+Sawirro
Soomaaliya September 19, 2020
Muqdisho,(SONNA):- War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in diyaarad nuuceedu yahay Fokker 50 oo ay leedahay shirkadda Silverstone Air Service nambarkeedu yahay SY-MHT ay maanta soo Sabti ah September 19, 2020 07;55 AM subaxnimo ku gashay shil garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho. Diyaaraddu ayaa Sii akhriso
Muqdisho.(SONNA):- Ra’iisul Wasaaraha UK, Boris Johnson ayaa maanta iyo berri ka fiirsanaya inuu adkeeyo xayiraadaha Covid-19 ee Ingiriiska, kadib markii uu sheegay in UK uu ku soo noqonayo fayraska oo dalku gelayo wejigii labaad. Tan iyo markii fayraska laga helay UK horraantii sanadkan waxaa u dhintay 41.732. Guud ahaan caalamka dadka u dhintay fayraska Corona […]Sii akhriso
(Manchester) 19 Sebt 2020. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Manchester United iyo Crystal Palace oo ku ballansan kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Manchester United ayaa xilli ciyaareedkeeda 2020-21 horyaalka Premier League si habsami leh u bilaabaysa caawa iyadoo Kooxda Crystal Palace ku soo dhaweynayaan garoonkooda Sii akhriso
(Madrid) 19 Sebt 2020. Marcelo wuxuu isku kululeeyay bilowga xilli ciyaareedkan cusub ee 2020/21, isagoo xoogaa qoob ka ciyaar ah ku soo bandhigay TikTok. Daafaca Real Madrid ayaa muuqaalkiisa ku soo bandhigay baraha bulshada gaar ahaan TikTok, isagoo qoob ka ciyaaraya ama jaasaya, taas oo ka farxisay taageerayaashiisa. Ciyaaryahanka reer Brazil ayaa u muuqda inuu […]Sii akhriso